That's so good, right?: Figuring Out If You Are Gay ✌
Figuring Out If You Are Gay ✌
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂေးဟုတ်မဟုတ် ဖော်ထုတ်ဆန်းစစ်ပါ (Figuring Out If You Are Gay)
(၁) ကိုယ်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ လိင်တူစွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်ကို သေသေချာချာရှင်းလင်းအောင်လုပ်ပါ။ လူတစ်ယောက်ကို ဂေးဖြစ်စေတယ်လို့ အတွေး တွေးထင်မိစေတဲ့ ကွဲပြားခြားနားသော နည်းလမ်းများစွာရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသောသူများက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖိုမလက္ခဏာ လိင်မှုကိစ္စဆိုတာ အဆိုပါလူရဲ့ ၀မ်းတွင်းပါ လိင် သို့မဟုတ် အခြားတစ်မျိုးမျိုးအပေါ် ညွှန်းဆိုပြီး ဘယ်လိုပဲ ချေပသည် ဖြစ်ပါစေ လူအချို့က လူတစ်ယောက်၏ ဖိုမလက္ခဏာကို ဆုံးဖြတ်ရာမှာ အဆိုပါလူ ဘယ်သူနဲ့အိပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ ထောက်ခံပြောဆိုကြပါလိမ့်မယ်။ အနည်းစုသော လူများကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှု၊ ဖိုမလက္ခဏာ၊ လိင်မှုကိစ္စဆိုတာ အဆိုပါလူရဲ့ နေထိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော လူမှုဝန်းကျင်က လမ်းကြောင်းပေးမှုကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ ဖိအားပေးမှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း ဖြစ်တည်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်နေကြတုန်းပါ။ မိမိ ဖွင့်ဆိုထင်မြင်ထားတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ် အမြင်ရှင်းစေတဲ့ အကြောင်းအရာလို့ ဘယ်လိုပဲ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ယုံကြည်ထားသည်ဖြစ်ပါစေ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုအဓိပ္ပာယ်ဟာ နည်းနည်းတော့ ခုခံပြောဆိုလို့ရနေရဆဲ အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။
Heterosexual (Straight): လိင်မတူသူနဲ့သာ ကာမဆက်ဆံလိုသောသူ (heterosexual) တစ်ယောက်ဆိုပါလျှင် အဆိုပါလူဟာ မိမိနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အုပ်စုဝင်များရဲ့ စွဲဆောင်မှုအပေါ်မှာသာ သာယာပြီး လိင်တူအုပ်စုအပေါ် လိင်စိတ်ခံစားမှု သို့မဟုတ် ချစ်မြတ်နိုးမှု ခံစားချက် မရှိတတ်ပါဘူး။
Bisexual (Bi): လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးစလုံးကိုနှစ်သက်သူ (besexual) ဆိုပါလျှင် လိင်/ဖိုမ တစ်မျိုးသက်သက်ထက်ပိုမိုပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားမှု သို့မဟုတ် ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုရှိနေသူလို့ ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။
Bi-curious: စူးစမ်းလေ့လာဆဲ (curious) အဆင့်ရှိသူတစ်ယောက်လို့ပြောလို့ရမယ့်လူမျိုးကတော့ လိင်တူ၊လိင်ကွဲ နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ အတွေ့အကြုံ ကောင်းကောင်းမရှိတာကြောင့် မိမိအနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကို လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်သလဲ လိင်စိတ်ခံစားမှုဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆုံးဖြတ်လို့မရသူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Homosexual (Gay): လိင်တူကိုသာစိတ်ဝင်စားသူ (homosexual) လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရမယ့်သူမျိုးကတော့ မိမိနဲ့ အမျိုးတူ/လိင်တူ အုပ်စုအပေါ်မှာသာ စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အပေါ်မှာ လိင်စိတ်သော်လည်းကောင်း ချစ်ခင်မြတ်နိုးစိတ်သော်လည်းကောင်း ကင်းရှင်းသော သူဖြစ်ပါတယ်။
Pansexual: အကုန်စိတ်ဝင်စားသူ (pansexual) တစ်ယောက်ဆိုတာကတော့ ဖိုမ အကုန်စိတ်ဝင်စားသူလို့ပြောရပါမယ်။
Pansexual တွေဟာ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ပြီးတော့ လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးစလုံးကြိုက်နှစ်သက်သူများအပေါ် စိတ်ဝင်စားနှစ်သက်တယ် ဆိုတာရဲ့ အပြင်ဘက်ရောက်ပါတယ်။ အရပ်စကားနဲ့ပြောရရင် ဘာလာလာ ဂိမ်း(Gain) တယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အချို့သော Pan တွေဟာ ‘gender blind’ သို့မဟုတ် တစ်ဖက်သားရဲ့ လိင်ဝိသေသ/ဖိုမလက္ခဏာအပေါ် သတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားတတ် ကြပါတယ်။ လတ်တလော လိင်အမျိုးအစားတစ်ခုကို အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးဖြစ်နေတတ်သော်လည်း ဘယ်လို ယောက်ျား၊မိန်းမဖြစ်တည်မှကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်ဆိုတာမျိုး သေချာတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ် စွဲလမ်းမှုမရှိကြပါဘူး။ (ဥပမာ - တွေ့ကြုံဆုံတွေ့မှု အရပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ယောက်ျားခြင်းကိုသာ စွဲလမ်းနှစ်သက်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမယ့် အခြားသော လိင်ဝိသေသမရွေးလူအစုံကို စိတ်ဝင်စားတာအတူတူပဲဆိုတဲ့ လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။)
Asexual (Ace): လိင်မှုကင်းမဲ့သော(Asexual) လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်တဲ့လူမျိုးကတော့ မိမိအပြင် အခြားသော သူများအပေါ် လိင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားခြင်းလည်းမရှိ လိင်ကိစ္စပတ်သက်ဆက်နွယ်ဖို့လည်းမကြိုးစားတတ်သောသူဖြစ်ပါတယ်။
(၂) မိမိငယ်စဉ်ကနေ အခုထိပြီးဆုံးခဲ့သော ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်များနဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကို ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်တစ်ဦးတစ်ယောက်က စာဖတ်သူကို နမ်းရှိုက်ချိန်မှာ ဘယ်လိုများခံစားခဲ့ရပါသလဲ? လှပတက်ကြွသော ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်တွေအပေါ် အမြဲလိုလို crush နေခဲ့ဖူးပါသလား? တကယ်လို့များ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေရှိခဲ့ချိန်တုန်းက လိင်ကိစ္စ သို့မဟုတ် ချစ်မှုရေးရာတွေ အမှတ်မထင် ဘောင်ကျော်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင် အဆိုပါအဖြစ်အပျက် တွေ ကာလလွန်ပြီးဆုံးခဲ့ သော်လည်းရင်ခုန်နေရတုန်းပဲ စိတ်လှုပ်ရှားနေဆဲပဲဆိုပါက စာဖတ်သူက straight တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးကောင်း ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူပါပဲ။ ဒါမှမဟုတ် စာဖတ်သူဟာ လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးစလုံးနှစ်သက်သူ(bi) တစ်ယောက်ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(၃) နောက်တစ်ခါ စာဖတ်သူနဲ့အမျိုးတူ လိင်တူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရရှိခဲ့ဖူးမယ့် ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုအတွေ့အကြုံတွေ သို့မဟုတ် စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ကြည့်ပါဦး။ ကဲ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေအပေါ် crush ခဲ့မိတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ၀န်ခံဖို့ စာဖတ်သူအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့နေသလား? စာဖတ်သူဟာ လိင်တူအုပ်စုဝင်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို လိင်မှုကိစ္စ ၊ လိင်စိတ်တစ်ခုခုနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူးသလားဗျ? စာဖတ်သူစိတ်ဝင်စားမယ် ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ ဖိုမတစ်ဦးဦးကို အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲမှုမရှိ စိတ်မ၀င်စားခဲ့ဘူးဆိုတာ တွေ့ရှိခဲ့ဖူးပါသလား? စာဖတ်သူ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့ လိင်တူတစ်ဦးတစ်ယောက် နဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းတွေအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ရတယ် ပြီးဆုံးသွားသော်လည်း စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်နေတုန်းပဲဆိုပါလျှင် စာဖတ်သူဟာ လိင်တူ(gay) သို့မဟုတ် လိင်တူလိင်ကွဲနှစ်မျိုးကြိုက်နှစ်သက်သူ (bi) တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်ကောင်းတစ်ခုရသူလို့ဆိုရပါမယ်။
(၄) မကြာသေးခင်က စာဖတ်သူ ခင်မင်ကျွမ်းဝင်ခဲ့သော သူငယ်ချင်းများနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံချိန်မှာ ပြုမူနေမိသော အမူအကျင့်များကို ဆန်းစစ်ပါ။ စာဖတ်သူရဲ့ အချစ်စိတ် သို့မဟုတ် လိင်စိတ်ဆန္ဓ ခံစားမှုများဟာ လိင်တူအုပ်စုဖြစ်သော သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် ခင်မင် ကျွမ်းဝင်မိသူများအပေါ် တရစ်ဝဲ၀ဲဖြစ်နေတယ်လို့ စာဖတ်သူသေချာစေ့ငုချိန်မှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိမိပါသလား? လိင်စိတ်အတွေးတစ်ခုဟာ စာဖတ်သူကို ဂေးဖြစ်အောင် အလိုအလျောက်မပြုလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မှတ်ထားရပါမယ်။ လိင်တူအုပ်စုဝင်တွေအကြောင်း စိတ်ကူးအတွေး ပေါ်တယ် ပြုလုပ်မိတယ်ဆိုတာ တစ်ခုခုအဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါတယ်။
Females: အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ ကိုယ့်အချစ်ဆုံးအရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အပေါ် အမြဲလိုလို ပုံမှန်ထက်ပိုတဲ့ မူပိုင်စီးထား လိုစိတ် ခံစားခဲ့ရပါသလား? အဆိုပါသူငယ်ချင်းကို ဘယ်သူ့ကိုမှမပေး စာဖတ်သူရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်ပဲ ဖြစ်စေ ချင်နေခဲ့သလား? ဒါမှမဟုတ် အဲ့ဒီသူငယ်ချင်းမှာ ယောက်ျားလေးချစ်သူတစ်ယောက်ရှိနေခဲ့တဲ့အပေါ် မနာလိုဝတ်တိုစိတ်ဝင်နေ မိခဲ့သလား? စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန် ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အ၀တ်မပါသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံကိုကြည့်မိချိန် စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်တာမျိုးဖြစ်ဖူးလား? ‘အို…သူက တော်တော်လှတယ်နော်’ ဆိုတဲ့ ယေဘုယျ အာရုံခံစားမှု သက်သက်မဟုတ်ဘဲ ‘၀ိုး…ငါသူ့ကိုလိုချင်တယ်’ ဆိုတဲ့ တကယ့်အာရုံခံစားမှုမျိုး ခံစားရတယ်လို့ စာဖတ်သူဆန်းစစ်မိပါသလား။
Males: စာဖတ်သူအနေနဲ့ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ကလိထိုးကစားတာမျိုး လုံးထွေးနေထိုင်လို့ရတဲ့ ရင်းနီးပတ်သက်မှု ရှိပါ သလား။ သူ့ကို သာမန် ဖြတ်သန်းဖြတ်လာစိတ်ဝင်စားမှုမျိုးသာ ခံစားချက်ရှိသလား။ အဆိုပါသူငယ်ချင်းဟာ gym ကစားဖော် သူငယ်ချင်း ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ အ၀တ်လဲခန်းထဲဝယ် အ၀တ်လဲဖို့ သူ့တီရှပ်ကို ခေါင်းပေါ်ကနေမချွတ်နေချိန် တကိုယ်လုံးလွှမ်းကြည့်မိပြီး ရင်တွေ တဆတ်ဆတ်ခုန်မိခဲ့ပါသလား။
(၅) စာဖတ်သူကို ဘယ်လိုလူက စိတ်လှုပ်ရှားထကြွစေသလဲ စစ်ဆေးပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ပြောတာက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆော် ထကြွ စေမှုအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူအတွက် ဘယ်လိုလူ ဘယ်လိုဟာက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ ထင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကြိုတင်မှန်းဆထားတဲ့ အယူအဆများကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ စွဲဆောင်မှုရှိသော အ၀တ်မဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ ဓာတ်ပုံ၊ ပြီးတော့ အ၀တ်မဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုယူလိုက်ပါ။ ဘယ်ဓာတ်ပုံက စာဖတ်သူကို လိင်ပိုင်ဆိုင်ရာနိုးကြွမှုဖြစ်စေပါသလဲ? တကယ်လို့ အခြားတစ်ခုခု?
Alex Aung (26 Sep 2016)
Posted by Alex Aung at 3:18 PM
Labels: ဗဟုသုတ, ဘာသာပြန်, ဆောင်းပါး